Haier Iron Bluetooth Review amin'ny Espaniôla | Androidsis
Manohy ny fijerinay ireo fitaovana Android vaovao izahay, amin'ity tranga ity amin'ny gadget, famantaranandro marani-tsaina na Smartwatch Bluetooth Miaraka amin'ny vidiny mora tokoa ary mety tsara omena amin'ny andron'ny Mpanjaka telo izay efa ho avy.
Ny fitaovana dia tsy iza fa ny Haier Iron Bluetooth inona no azontsika atao? avy amin'ity rohy ity ihany noho ny vidin'ny 42,47 Euro, vidin'ny tolotra mihena tsy misy hafa ary tsy latsaky ny 54% amin'ny vidiny ofisialy. Ireto ny andinindininy rehetra momba ity Smartwatch Bluetooth lafo vidy ity izay misy a sensor amin'ny tahan'ny fo miasa.
1 Haier Iron Bluetooth Famaritana ara-teknika
2 Ny tsara indrindra amin'ny Haier Iron Bluetooth
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Haier Iron Bluetooth
Haier Iron Bluetooth Famaritana ara-teknika
efijery LCD 1'54 »240 x 240 teboka
processeur MTK 2502C
Fitaovana hafa Pedometera - Fanairana - Senseur tahan'ny fo - Metera kalitaon'ny torimaso - Kalandrie - Fampandrenesana amin'ny app - Mametraka ny fampiharana anao manokana. Fampandrenesana ny SMS sy ny antso - Fahaizana miantso sy mandray antso avy amin'ilay fitaovana mihitsy - Fanaraha-maso mozika - mifanentana amin'ny Android sy iOS -
bateria Polymer lithium mitambatra
lafiny X X 49 41.5 10.9 MG
lanja Gramin'ny 82
vidiny 42'47 euro
Ny tsara indrindra amin'ny Haier Iron Bluetooth
Tsy isalasalana fa ny tsara indrindra Haier Iron Bluetooth Hitantsika amin'ny vidiny ambany sy amin'ny efijery LCD mahavariana 1,54 ″ ary ny vahaolana 240 x 240 teboka misy haavon'ny famirapiratan-tsaina mampihetsi-po tsara ampiasaina amin'ny toe-javatra rehetraNa dia amin'ny tara-masoandro mamiratra aza isika dia tsy hanana olana amin'ny fampiasana ireo fampiasa rehetra amin'ity Smartwatch mora vidy ity.
Etsy ankilany, ny bateria polymer lithium polymer mitambatra izay afaka fenoina tanteraka ao anatin'ny adiny iray monja, dia manome antsika a mizaka tena hatramin'ny 72 ora amin'ny fiaretana na mijoroa ary mandra-pahatongan'izany Fahaleovan-tena 8 ora amin'ny antso.
Teboka iray hafa manohana an'ity Smartwatch ara-toekarena manaitra ity, mitondra azy amin'ny fametrahana azy ny fampiharana manokana hifehezana ireo fiasa rehetra omen'ny famantaranandro antsika ary tehirizo ny tantaran'ny fitifirana poleta, nandeha ny dingana ary mifehy ireo rindranasa izay tianay aza ny mahazo fampandrenesana mivantana amin'ny hato-tanana. Fampandrenesana vitsivitsy mamela antsika vakio ny hafatra voaray ao amin'ny kaontinay WhatsApp na dia miditra amin'ny resaka feno aza ianao ny fifandraisana izay mandefa antsika ny hafatra.
Haavo famirapiratana mahatalanjona
Fampiharana manokana izay mandeha tsara
Ny ratsy indrindra amin'ny Haier Iron Bluetooth
Raha raisina ny vidin'ity Smartwatch Bluetooth manaitra ity dia tsy azontsika atao ny mangataka ireo fampandehanan-draharaha omen'ny Smartwatch miaraka amin'ny rafitra fiasa Android Wear amintsika, izany no antony taorian'ny fampiasako mafy ny famantaranandro nandritra ny andro maromaro, ilay hany zavatra hitako fa ratsy na ratsy, dia ny tsy fampidirana safidy mamela antsika, raha vantany vao ampiarahina amin'ny Smartphone, afaka manafoana haingana azy io rehefa mahazo antso miditra rehefa any amin'ny toerana tsy misy tsiambaratelo isika ary tsy liana amin'ny fampandrenesana ny resadresaka ataonay momba ilay mpandahateny mahery vaika an'ny Haier Iron Bluetooth.
Tsy misy tapaka haingana mandritra ny antso
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Haier Iron Bluetooth, Smartwatch bluetooth tena misy eo amin'ny 40 euro fotsiny
Jose Carlos ElChaos dia hoy izy:
Ny famerenana dia tena tsara, fa manana fanontaniana aho, mamela ny herin'ny fiara eo amin'ny efijery miaraka amin'ny fihetsika?
Valiny tamin'i Jose Carlos ElChaos
misy mahay mamaky whatsapp amin'ny famantaranandro, miseho ihany izy ireo fa tsy afaka mamaky azy ireo
Raha afaka manapaka haingana ianao mandritra ny antso, rehefa miantso anao amin'ny findaiko izy ireo, dia misy varavarankely maromaro miseho eo ambany, fitendry, mpifandray, mpandahateny, Bluetooth, kasihinao ny bokotra Bluetooth ary amin'ny finday ihany no itenenanao.
David Plaza Urda dia hoy izy:
Ahoana no ahafahako miditra amin'ny resaka WhatsApp? Rehefa mahazo hafatra mihoatra ny roa aho dia tsy afaka mamaky azy ireo, na dia afaka manao telegram aza aho.
Valiny tamin'i David Plaza Urda
Petunia Perez dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho io fampahalalana io, nandiso fanantenana ahy ilay mpandahateny ary tsy tsapako ny fitaratra. Mirary ny soa indrindra.
Valiny tamin'i Petunia Pérez
Tsy haiko ny mamaky azy ireo, voavahao ve izany?
Goyo dia hoy izy:
Ampidiriko ny akanjo Fudo ary rehefa apetrako izy dia mahazo hadisoana 503 hahitako raha misy ny zavatra mitovy mitranga sy ny fomba famahana azy, misaotra
Valio i Goyo
Izao dia mahazo lesoka 505 aho rehefa mametraka «Fundo Wear»
Ahoana no fomba ahafahako mampifanaraka ny hafatro amin'ny tele?
Manuel Jesus Benìtez Ortiz dia hoy izy:
Napetrako azy io ary rehefa afaka adiny 8 mahery dia mitohy ny famandrihana azy ary tsy feno ny baoritra bateria. Rehefa aorian'ny famoahana maherin'ny 15 ora dia hitako fa tsy mihetsika intsony ny bara fandefasana fa amin'ny ampahatelony. Nifandray tamin'ny tranokala nividianako azy aho, saingy manana hevitra ve ianao? Nisy zavatra toy izany nitranga taminao?
Valiny tamin'i Manuel Jesus Benìtez Ortiz
Rehefa mahazo hafatra WhatsApp 2 aho dia tsy afaka mamaky azy ireo, ilay voalohany ihany no novakiako, fantatrao ve ny fomba fanamboarana azy?
Ny LG G5 dia ho tonga miaraka amin'ny efijery faharoa sy fakan-tsarimihetsika faharoa
Facebook dia mizaha ny fanasokajiana News Feed amin'ny finday